By axadle Last updated Feb 28, 2020
Cashadii kadib ayay Falis iyo hablihii la dashay ay bilaabeen in ay alaabta Meesha ka guraan waxaana isu soo haray Mursal iyo Falis waalidkeed oo uu wehliyo Qadar waxaana hadalka Furay Mursal Yiri.
Aabe waxaan rabaa in beri aan si buuxda aan kaga soo gogol fadhiisto Falis xoolana aan ka bixiyo.
Mursalow Aabe reerkaan ayaad ka tirsan tahay reer Warsame Calina oo aan aniga u weyn nahay waxaan rabnaa in Falis oo caruusadaada ah oo aad u qurux badan aan kugu wareejino wax kale lagaama rabo.
Maya Aabe Falis qaali ayay igu tahay waxaana rabaa in sidii dhaqanka noo ahaa aan ka Xoolo dhiibo waxba yaan la igu diidin.
Sidaad jeceshahay wiilkayga gabadha ninkeeda ayaa quruxsada waana kuu deynay
Mid yar oo aniga iyo Falis aan weli isku fahmin ayaa jirta mana aqaan sida aan ku ogoleysiinayo
Ii sheeg wiilkayga wixii khilaaf caawa ayaa la xalinayaa
Khilaaf ma jiro ee waa kala aragti duwanaasho noo dhaxeysa aniga waxaan rabaa in Falis guriga reerkeeda laga soo galbiyo oo iyada caruusad ah gurigayga loo soo guuriyo balse iyada waxaas oo dhan ma rabto bes in la mehriyo kadibna aan dhaqano ayay rabtaa aniga taa waa ii cuntami ladahay Falis farxad ayay u qalantaa iyo in maalinteeda loo cayaaro.
Alla wiilkayga maxaan isku aragti nahay farxada Fais maalin kasta Ayaan rabbiga ka baryay maantana ducadayda ayaa la aqbalay Falis guriga reerkeeda ayaana laga soo galbinayaa iyaduna ma diidi karta oo aniga ayaa la hadlayo .
Falis waa curadka reer Warsame Cali aroos hoose kama yeeleyno Aroos weyn oo aan Hotel ku dhigna ayaa dhacayo Mursal waa balan in Falis oo aad u qurux badan xagaaga loo soo guuriyo.
Markiiba waxaa soo gashay Falis oo tiri
Haye maxaad isku keenteen
Falisey arrini waa ay soo dhamaaday adiga maalin qura ayaad heysataa maalin kadibna waxaa lagaa rabaa in aad ku soo wareegto xagayga si aan qaban qaabanada arooskaaga u wada galno Mursal oo u helo fursad uu gurigiisa ku diyaarsado.
Falis oo aan hadalka Meesha la geeyey jecleysan ayaa inta ay Mursal u jeesataya ku tiri
Mursal maxay tahay waxa aan maqlayo adiga iyo aniga horaan u hadlay waliba arrintaan waan isla meel dhignay.
Arrimaha oo dhan Hooyo Maryan ayaa la wareegtay hadalkna iyada ayaa goysay
Hooyo sidee aniga sida aad wax u wadaan ima cajibinin sidaana wax uma rabo Hooyo I faham
Maxaan ku fahmaa hee aniga curadeyda ayaa la aroosayaa ma geed I qariya jiri kara waa in alalaaskayga la wada maqlaa.
Hooyo Gabadhaada Aroos hore ayay u gashay ma taa Ayaad iska indho tireysaa
Arooskaas maaba aniga ii xisaabsan Falisey beri wixii halkaan kaa yaalo soo aruurso baabuur Ayaan kuu soo dirayaa diyaarintaada iyo qurxintaada kolay adiga iyo cida aad u xulato ayay idiin taalaa narrimaha kalana aniga iyo Qadar noo daaya haye Xaaji.
Waa sidaad sheegtay Xaajiya Falis hadalkaan dib looga noqon maayo waa sidii ay hooyadaa u goysay
Falis waa loogu adkaatay hadalkii wax walbana waxa ay noqdeen sidii Hooyo Maryan iyo Mursal ay rabeen.
Habeenkaas halkii ayaa lagu wada duceysatay laguna balamay si wadajir la isku gacan qaaday oo la isa macasalaameeyey waxaase jirtay in mar kale haddana Falis aysan gacan qaadin walaalkeed Qadar.
Falis si aysan xaajo u qorsheysanin ayaa loo dhigay haddana ma jirin awood ay dul saari karto hadalkii Hooyadeed iyada oo ay ku adag tahay ayay aqbashay cidii ugu horeysay ee ay la ahadashay ayaa waxa ay ahayd saxiibteed Sureer oo xaalka wax badan la socotay waxayna ugu bishaareysay in arooskeeda u soo guda galay.
Falis maalinteedii la siiyey ayay isku diyaarisay alaabteeda ayay xerxerneysay waxaa u soo gashay Aamow oo ku tiri.
Falisey gabar ayaa kuu joogto
Walaahi aniga weligey ma arkin baabuur cad ayay gacanteeda ku wadadaa horena uma arkin adiga ayay ku weydiisay aniga qolka fadhiga Ayaan geeyey.
Kolay ma fahmin waan u soo baxaa ee waxay cabto u geey
Falis wax yar kadib ayay u soo baxday balse markii ay qolka fadhiga soo gashay ayay la yaabtay cida sugeysa waxa ay ku tiri.
Alla Samiira walaashay ii waran walaahi qalbigayga kuma soo dhicin waan la yaabanaa cida I sugeysay.
Maasha allah ma maantaa meel aan kaaga haro jirtaa Hambalyo walaashay
Qadar ayaa xalay ii sheegay walaahi ma maleyn kartid sida aan kugu farxay Kun jeeer Hambalyo.
Maasha Allah hooyo ayaa I qasbeyso rabtana in aroos weyn ay dhigto
Walaahi in maalin laguu cayaaro waad u qalantaa noo ogolow in aan farxada kula wadaagno Dumaashi aniga maalintaa waqtigeyga ayaad leedahay.
Maasha allah ka waran wiilkayga
Sidii ayaa lagu balamay in maalinta arooska maalin ka hor in ay Samiira soo wareegado sidaana farxada iyo howsha kala qeyb qaadato Falis oo aheyd qof ku qaali ah.